China okomoko ịchọ mma mbukota esetịpụ efu iko mma ude karama na ite factory na suppliers | Jiamei
Mbukota ịchọ mma na-eme ka iko iko ude mara mma na ite dị ọcha
Olu: 30g, 50g, 30ml, 60ml, 100ml, 120ml
Agba: Dị ka gị arịrịọ
Ojiji: emulsion, isi, ude ihu na ndị ọzọ
Service: silk ihuenyo, na-ekpo ọkụ zọ, frosting, labeelu, ebi akwụkwọ na agba na ndị ọzọ na Filiks
Aha ngwaahịa Mma mma Ngosiputa Ngwa
Mbupu DHL, Fedex, UPS, Ibu ikuku, Ibu Oké Osimiri
OEM Dị ka gị arịrịọ
Mma anyị na-edozi ihe ịchọ mma nwere ọdịdị dị nro. Ha na-mere nke ezi iko na iko nwere ike e na agba dị iche iche dị ka gị requirements.Their kalama olu na mkpuchi na-kanyere na a ìhè okomoko style ụkpụrụ, na-eme ka n'ozuzu kalama anya dara oké ọnụ na siri. Ọ bụghị naanị na ọkwa dị elu, na ọrụ ahụ siri ike nke ukwuu. Ndị na-eri nri na-enwe ezigbo mmasị n'ụdị nkwakọ ngwaahịa a na ọkwa dị elu. karama ude na-abịa na mkpuchi na mkpụ aka aka wetara. mmiri na mmiri na mmiri. karama kwekọrọ na isi mmiri mmiri.
Ogo nke karama ude bụ 30g, 50g. Nkọwa nke mmiri etemeete na karama ude bụ 30ml, 60ml, 100ml na 120ml.
A na-eme karama ndị a nke siri ike, nke siri ike nke iko doro anya nke nwere ike ịsacha ma jigharịa mgbe ọ tọgbọ chakoo, yabụ ọ dị mma. Biko nwee obi ike na ịdị mma ya, site na nyocha dị mma, biko nwee obi ike iji. nwere silk ihuenyo, na-ekpo ọkụ stamping, frosting, labeelu, na-ebi akwụkwọ na agba na ndị ọzọ na Filiks, otú anyị nwere ike ahaziri iche iche okwu na usoro ị chọrọ.
Mgbe ị na-ahọrọ ngwaahịa, ị nwere ike ịkpọtụrụ onye na-ere ahịa anyị ka ị jụọ ụfọdụ ajụjụ ị chọrọ ịmata .Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị ga-ezitere gị ihe nlele maka nkwenye gị nke ụdị ahụ. Mgbe ị kwụrụ ụgwọ ahụ, anyị ga-amalite mmepụta N'ikpeazụ, a ga-ezigara gị ngwongwo (ọnọdụ njem zuru ezu), ị ga-enyocha ngwongwo ahụ, nyefee ụgwọ nkwụnye ụgwọ, ma mezue usoro ahụ.
Anyị nwere ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa mara mma iji gee ntị na nsogbu gị ma nye gị azịza.
Anyị ọrụ echiche anyị bụ ndị ahịa mbụ, ọrụ mbụ! Anyị na-atụ ka azụmahịa mmekọrịta gị na-atụ anya gị ase.
Nke gara aga: Obere-okomoko oval egg mmiri mmiri na ntọala kachasi mkpa iko karama
Osote: High-ọkwa Lancome usoro nke skincare ikom packing karama